Wholesale Chandelier PC-212 Metal art chandelier maha-olona chandelier mpihinana chandelier tsotra Mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-212 Metal chandelier mpiorina mpanefy chandelier mpihinana sakafo tsotra
Size: lava 100cm
Loharano maivana: tarika LED
Ny Chandelier dia mandeha tsara amin'ny fomba anatiny, manomboka amin'ny minimalist ka hatramin'ny boho. Ity pendant valindrihana maoderina mavitrika ity dia manana endrika tsy voafaritra sy volo varahina. Ny takelaka vy boribory miaraka amina maodely volo marevaka manodidina ny endriny mba hamoronana vokarin'ny jiro tsy mahazatra.
Ny KICHLER Eris 15.25 in. 6-Light Polished Nickel Chandelier dia misy kristaly optique izay mamily ny hazavana hamoronana vokatra mamirapiratra. Izy io dia mitazona takamoa miisa 6 hanome fahazavana mamirapiratra. Miaraka amin'ny volavolan-keviny tamin'ny taona 1960 sy ny famaranana nikela voahosotra, ity chandelier ity dia manampy ny fomba ankehitriny amin'ny haingon-trano rehetra.
Mampiasa takamoa B karazana labozia miisa 60-Watt enina (tsy tafiditra)
Fanamboaran-jiro amin'ny taonjato afovoany vita tanana vita amin'ny jiro Pendant Lighting Retro Ceiling Light Fixture. Sombin-javatra tsara indrindra izay manambatra tonga lafatra ny fomba maoderina Mid sy ny hatsarana kely indrindra. Izy io dia afaka handravaka sy hampamirapiratra ny lakozia, ny efitrano fisakafoana, ny lavarangana na toerana hafa ao an-tranonao, hahatonga anao hahatsapa ho miala sasatra sy hankafizinao kokoa. Endri-javatra tsara tarehy endrika akrilika lamaody ao amin'ny sampan'ny jiro famolavolana jiro, mety hanazava faritra bebe kokoa mifanaraka amin'ny ilainao. Ny kalitaon'ny haavo dia manangana takelaka valin-drihana avo lenta sy baolina metaly, fahaiza-mitondra matanjaka, ravina akrilika manana fifindran'ny jiro mahery sy fahatsapana tsara amin'ny tanana, miteraka fahatsapana tsy manam-paharoa.
Fitaovana: metaly miampy akrilika, firafitra mafy, tsy vaky, matanjaka ary mateza
Fomba: ankehitriny, haingo, zavakanto maoderina tsotra, jiro pendant mitahiry angovo
Mpitroka vy, rafitra mafy, mafy rafitra, tsy mora manjavona, mateza
Mitsitsy angovo, herinaratra ambany, fiarovana ny tontolo iainana
Teo aloha: Chandelier PC-8293 Fahazavana mihaja kristaly hazavana chandelier maha-mpijery tsotra chandelier
Manaraka: Chandelier PC-8237 Mpiorina mpiorina mpiorina chandelier mpiorina tsotra tsotra
Chandelier 33301 fomba kanto labozia romana tsotra ...